ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သင့်သွေးဖြင့်…”
ကိုပေါရေ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုပေါက သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ဖူးတာ ဝမ်းသာကြည်နူးစရာပါ။ ကျွန်မကတော့ ငယ်ကတည်းက သွေးအားနည်းတတ်လို့ သွေးလှူခွင့်မကြုံခဲ့ဘူး။ ကျောင်းမှာ သူများတွေသွေးလှူတာကို ဘေးကပဲအားပေးခဲ့ရတယ်။
ကိုပေါရဲ့ သင့်သွေးဖြင့်... ကိုလည်း လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ။ သွေးကျဲတဲ့အထဲမှာ ကျနော်လဲ ပါသဗျို့။
ဟုတ်သဗျ :D ဘာပဲ ဖြစဖြစ လှူခဲ့တာတွေ အတွက် သာဓု ပါ ခင်ဗျာ :D
စာရေးသိတ်သွက်တဲ့ ကိုပေါရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို တန်ခူးဆီက တစ်ဆင့် လာလည်ပါတယ်။ စာတွေ အများကြီး ဖတ်သွားပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံး ပိုစ့်ကတော့ တစ္ဆေ ပါ။
Whenever I meet them, they still remembered you and asked about you. I told them your latest information(as much as I know :) ) and we all laughed,remembering that day. I think they will not forget you both and that time.
We frequently visit your blog, reading your posts, laughing, smiling, etc....
တန်ခူး၊ ကိုစေးထူး၊ ကိုစိုးထက်နဲ့ သက်ဝေတို့ လာလည်ပြီး ကွန်မင့်ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တီတီအယ်လ်.......ငါ့ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲသူငယ်ချင်း။ တူတူဘဲတို့ ၀ူးဝါးတို့ကို သတိမရဘူးလား။ အဲဒီအချိန်တွေက ပျော်စရာလည်းကောင်း၊ အခုကျတော့ လွမ်းစရာလည်းကောင်းပေါ့။